निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ७ भित्र प्रदेशसभाको चुनाव गर्न नसकिने भन्दै अब प्रतिनिधिसभाको चुनाव मात्रै हुन सक्ने जनाउ दिएको छ । सरकारले भने तोकिएकै मितिमा दुबै चुनाव गर्ने दाबी गरेको छ ।
प्रदेशको चुनावबारे निर्वाचन आयोगले कुनै औपचारिक निर्णय नगरे पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आगामी माघ ७ भित्र प्रतिनिधिसभाको मात्रै चुनाव हुन सक्ने बताएका छन् ।
कुरा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने- ‘हामीले सरकारलाई पनि भनिसकेका छौं, दुईवटै निर्वाचन गराउने सम्भावना अब करिब-करिब टरेको छ । माघ ७ भित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको सम्भावना छ ।’
संविधानले नै माघ ७ सम्म व्यवस्थापिका संसदको म्याद तोकेको छ । संविधान कार्यन्वयनका लागि यो अवधिभित्रै प्रदेशसभाको पनि चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो अवधिमा प्रदेशसभाको चुनाव गर्न नसकिने प्रमुख आयुक्त यादवले अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन गम्भीर छ ।
यादवका अनुसार निर्वाचन आयोगले असारभित्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सम्बन्धी कानुन संसदबाट आउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म ती कानून नआएको यादवले बताए ।प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनका साथै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन समयमै नआएका कारण अब प्रदेशको चुनाव गराउन कठिन हुने यादवले बताएका हुन् ।
त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन साउन १५ सम्म आउनुपर्ने आयोगको माग थियो । क्षेत्र निर्धारण आयोगले भर्खरैमात्र काम थालेको छ ।
एकैपटक चुनाव गर्दा के हुन्छ ?
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकैपटक गर्ने सरकारको प्रस्तावसमेत जटिल रहेको बताए । तर, यसबारेमा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरु र सरकार तीनै पक्ष बसेर छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।
एउटै मतपत्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अलग मतदान गर्ने विकल्पबारे पनि छलफल गर्न सकिने यादवले बताए ।
तर, माघ ७ अघि संविधान कार्यान्वयनका लागि भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भने हर हालतमा गर्नैपर्ने उनले बताए ।
प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकैपटक गर्न मतपत्र व्यवस्थापन, मतदान केन्द्र व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षा लगायत धेरै प्राविधिक कठिनाइ रहेको यादवको ठहर छ । दुबै निर्वाचनका लागि ७ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
गृहमन्त्री भन्छन्- दायाँ वायाँ हुँदैन, दुईवटै चुनाव हुन्छन्
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले माघ ७ भित्र प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचन गर्न सकिने बताए पनि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले भने तोकिएकै मितिमा दुईवटै चुनाव हुने बताए ।
प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री शर्माले भने-‘तोकिएकै मितिमा दुईवटै चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार प्रंतिवद्ध छ, यसमा दायाँ वायाँ हुँदैन ।’
निर्वाचन सम्बन्धी कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र संसदले त्यसलाई छिट्टै पारित गर्ने मन्त्री शर्माले बताए ।
साथै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले क्षेत्र निर्धाणका लागि २१ दिन समय पाएको बताउँदै मन्त्री शर्माले आयोगको प्रतिवेदन पनि चाँडै आउन लागेको बताए ।
आगामी माघ ७ भित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा दुबैको चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए ।
एमाले नेता खुशी !
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको चुनाव पहिले हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले प्रदेशको चुनाव गर्न नसकिने भन्दै पहिले प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव राखेपछि एमाले नेताहरु खुशी देखिएका छन् । एमालेले प्रदेशको भन्दा पहिले प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका बेला यादवको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
मंसिरमा प्रतिनिधिसभा चुनाव नगराए संवैधानिक र राजनीतिक संकट उत्पन्न हुने भएकाले पहिले प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको एमाले नेता सुवास नेम्वाङले प्रतिक्रिया दिए ।